Facade / varavarana lamba eo amin'ny rindrina Glass Glass | Sina Facade / varavarana lamba eo am-baravarana amin'ny mpanamboatra rindrina, mpamatsy
Fampahalalana fototra Ny fitaratra laminated dia noforonina ho sandwich misy ravina 2 na mihoatra ao an-tsambo, eo anelanelan'ny mamatotra azy miaraka amin'ny interlayer mafy sy thermoplastic polyvinyl butyral (PVB) eo ambanin'ny hafanana sy ny tsindry ary esory ny rivotra ， ary apetraho ao anaty avo -mahatsika ny lasantsy mavesatra manararaotra ny hafanana sy ny tsindry avo mba hanalefahana ny habetsaky ny habetsaky ny rivotra ao anaty vata famaritana ny vera laminated vera Max. habe: 3000mm × 1300mm fitaratra vita mirandrana Lamba fantsom-bolo efa lasa ...
Fampahalalana fototra Yongyu Glass dia mamaly ny fanambin'ny arsiteky androany famatsiana JUMBO / OVER-Sished monolithic tempered, laminated, insulated vera (roa sy triple glazed) ary ambany vera misy sosona ambany hatramin'ny 15 metatra (miankina amin'ny famoronana fitaratra). Na ny ilanao dia natao ho an'ny tetik'asa manokana, fitaratra na vera be dia be, dia manolotra ny fandefasana an'izao tontolo izao amin'ny vidiny tena mifaninana isika. Jumbo / vera fiarovana azo antoka azo ampiharina 1) Taratasy fitaratra vera miendrika vatosoa / Flat mihena ...
Fampahalalana fototra Ny DuPont Sentry Glass Plus (SGP) dia miompana amin'ny plastika interlayer vita amin'ny plastika mafy izay misy laminate eo anelanelan'ny vera roa sosona. Manitatra ny fampandrenesana ny fitaratra laminated mihoatra ny teknolojia ankehitriny satria ny interlayer dia manolotra dimy heny ny tanjaky ny ranomaso ary in-100 avo ny fahatsapan'ny fantsom-baravarankely PVB mahazatra kokoa. SGP mampiavaka (SentryGlas Plus) dia ion-polymer amin'ny etilena sy methyl asidra ester. Manome tombony bebe kokoa amin'ny fampiasana SGP ho fitaovana interlayer izy io ...
Vera fiarovana azo aforoka / fitaratra fiarovana
Fampahalalana fototra raha ny mamatotra anao, ny fantsom-baravarana miloko na ny manenjana ny voaroy dia natao ho an'ny fiarovana, fiarovana, lozika na zava-mahadomelina, manome ny vokatra tsara indrindra momba ny vokatra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay. Fitaratra be vovoka / fitaratra matevina azo alaina amin'ny habe sy ny endriny ary ny loko Radius hatramin'ny 180 degre, radii marobe, min R800mm, halavan'ny max 3660mm, avo 12 metatra mazava, varahina volafotsy, volondohany, maintso na solomaso manga. fitaratra / vera miloko fitaratra misy azo alaina amin'ny karazana c ...
Karatra fitaratra ambany-E
Fampahalalana fototra Ny vera ambany-tsindrona (na fitaratra ambany-ambany, ho fohy) dia ahafahan'ny trano sy ny trano milamina sy mahomby. Ny lambam-bolan'ny mikroskopika amin'ny metaly sarobidy toa ny volafotsy dia ampiharina amin'ny fitaratra, izay avy eo dia mampiseho ny hafanan'ny masoandro. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaratra ambany-E dia mamela ny habetsaky ny hazavana voajanahary amin'ny alàlan'ny varavarankely. Rehefa misy amina fitaratra be dia be dia tafiditra ao amin'ireo vondrona fitaratra vera (IGUs), mamorona elanelana misy eo anelanelan'ny takelaka, tranobe sy trano fonenana ny IGU. Ad ...
Fampahalalana fototra Ny vera misoratsoratra dia karazana fitaratra azo alain-tahaka amin'ny alàlan'ny fitaratra mando mandra-pahatongany. Avy eo eo amin'ny taniny no mamorona ny fihenjanana mampitony ary mangatsiatsiaka tampoka ny vela-tanety, noho izany ny adin-tsaina mampihetsi-po dia mizara indray eo amin'ny velon'ny vera raha toa ny fisehoan'ny fihenjanana misy eo afovoan'ilay fitaratra. Ny fihenjanana amin'ny fihenjanana ateraky ny tsindry ivelany dia mifandanja amin'ny tsindry mafy manelingelina. Vokatr'izany dia mitombo ny fampisehoana fitaratra noho ny fitaratra ...
Fampahalalana fototra vita amin'ny rindrina fitaratra sy fahatelarana vita amin'ny fitaratra Inona no hitanao rehefa mivoaka sy mijery ny manodidina ianao? Trano avo avo! Miely hatraiza hatraiza izy ireo, ary misy mahavariana momba azy ireo. Ny endrik'izy ireo mahavariana dia nofenoina rindrina fitaratra lamba izay manampy trotraka tsara amin'ny endriny ankehitriny. Izany no ataontsika, ao amin'ny Yongyu Glass, miezaka ny hanome ao amin'ny ampahany ny vokatra azontsika. Tombontsoa hafa Ny takelaka fitaratra sy ny rindrina eo amin'ny rindrina dia miditra amin'ny pleth ...